Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: November 2007
The ENC Delegation: (from right) Dr Lian H Sakhong – General Secretary, Harn Yawnghwe - Advisor, Saw David Taw - Joint General Secretary, Dr Sui Khar - Chair, Foreign Affairs CommitteePhoto: Mizzima News
Saw Steve,amember of the Committee for Internally Displaced Karen People, told The Irrawaddy on Friday, “Burmese troops started to enter Mon in Pegu Division in late November. Villagers are now on alert. After having meals, they [villagers] always keep their plates, pots and cups inabasket and they're prepared to flee if necessary.”
“We've heard that they [Burmese armies] intend to launch military operations, especially against the KNU. Small clashes between the KNU and Burmese army happen every day in the region of Three Pagodas Pass, Kawkareik, Kyar Inn Seik Gyi, Myawaddy, Pa-an and Taungoo District.”
“လိုက်ဆို ------ ဒါဟာ စာသင်တိုက် ဆေးရုံမဟုတ်ဘူး” ဒီကာရန်မဲ့ စာပိုဒ်လေးရဲ့ ကလောင်ရှင်ကြီးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ရက်စက်ကြမ်း ကြုတ်မှု မှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ နအဖစစ်အုပ်စုနဲ့ ခေတ်ပြိုင် စနစ်ပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ အာဏာရှင်ကြီးတဆူဖြစ်တဲ့ ပဲခူးမြို့က ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်ကြီးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကာရန် မဲ့ စာပိုဒ်တွေကို ညနေခင်း ဘုရားဝတ်ပြုအပြီး ဆရာတော်က ရှေ့ကတိုင်ပေး သံဃာတော်များက နောက်ကလိုက်ဆိုနဲ့ သူရဲ့အကြံပြုချက်တွေကို စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ လိုက်ဆိုပြီး ထောက်ခံ နေခဲ့ကြရတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာညောင်းခဲ့ပြီဆိုတော့ ယနေ့ ကြံ့ ဖွှံ့အဖွှဲ့က ဦးဆောင် ကျင်းပနေတဲ့ ပြည်သူလူထုထောက်ခံပွဲဆိုတာတွေကတော့ ရိုးသွားခဲ့ပါပြီ။ ရိုးနေတဲ့ ဒီစနစ် ဆိုးကြီးကို ကြံ့ ဖွှံ့အဖွှဲ့က ဆက်လက် အကောင်ထည်ဖော်နေတယ်ဆိုတော့ ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်ဟာ ကြံ ဖွှံ့အဖွှဲ့ကြီးရဲ့ အကြံပေးအရာရှိများ ဖြစ်နေရော့သလားဘဲ။
1994 -ခုနှစ်လောက်က ညောင်ရွှေမြို့က ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ကြခတ်ဝိုင်းကျောင်းတိုက်ကို ကြွလာတော်မူလို့ သံဃာတော်များက ၀တ္ထုငွေများစုပြီး ကန်တော့ ကြရာ ကန်တော့ပွဲအပြီးမှာတော့ ဆရာတော်ကြီးက စာသင်သားသံဃာတွေကလှူ ဒါန်းတဲ့ အဲဒီ ၀တ္ထုငွေတွေကို သံဃာတော်များအား ပြန်လည်လှူဒါန်းပါ၏ ဆိုပြီး ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်ရဲ့ လက်ထဲမှာ အပ်ထားခဲ့တယ်၊ ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ပြန်ကြွသွားပြီးလို့ ညနေခင်း ဘုရားဝတ်ပြုပြီးချိန်မှာတော့ ၄င်းဝတ္ထုငွေတွေကို ကျောင်းတိုက်အတွက် အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ သံဃာတော်များရဲ့ ထောက်ခံမှုကို သာဓုသုံးကြိမ်အခေါ်ခိုင်းပြီး အတည်ပြု သွားပါတော့တယ်၊ အဲဒီနေ့က မြင်ရခဲလှတဲ့ အာဏာရှင်ကြီးရဲ့ အပြုံးမျက်နှာကိုလည်း ပြန်လည် မြင်ယောင်မိပါသေးတော့တယ်။
ကြခတ်ဝိုင်းကျောင်းတိုက်ရဲ့ စည်ကမ်းအရ မနက်ငါးနာရီ ထိုးတာနဲ့ အဆောင်ဘုန်းကြီးတွေ ဦးဆောင်ပြီး မြို့တွင်းကို လမ်းကြောင်းသုံးခုနဲ့ ဆွမ်းခံထွက်ကြရပါတယ်၊ မိုးတွင်းကာလတွေ မှာဆိုရင် ဒူးဆက် ပေါင်လည်လောက်ရှိတဲ့ မိုးထဲရေထဲတွေမှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဆွမ်းခံသွားနေ ကြရတော့ အသွေးအသားနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကြာကြာဘယ်ဒဏ်ခံနိုင်ပါ့မလဲ၊ ဖျားကြ နာကြသူတွေ တိုးလာတော့တာပေါ့၊ အဲဒီလို ဖျားနာသူတွေ တိုးပွါးလာချိန်မှာ သံဃာတော်အများ ဆရာတော် နောက်ကနေ လိုက်ဆိုနေခဲ့ကြရတာကတော့ အစမှာဖော်ပြခဲ့သလို “ဒါဟာ စာသင်တိုက် ဆေးရုံမဟုတ်ဘူး” စတဲ့ စာပိုဒ်မျိုးတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဖျားနာနေလို့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့် သက်တောင့် သက်သာ အနားယူရလိမ့်မယ်တော့ မထင်လိုက်ကြပါနဲ့ ၊ သက်ဆိုင်ရာစာချဘုန်းကြီးတွေရဲ့ အထံမှာ အနားယူခွင့် လျှောက်လွှာတင်ကြရပါသေးတယ်၊ လျှောက်လွှာတစ်ခါတင်ရဲ့ သက်တမ်းကတော့ ၇-ရက်မျှသာ ၊ ကျောင်းတိုက်ထဲမှာ ဆေးကျောင်း ဆိုတာတော့ ရှိပါရဲ့ ၊ ဒါပေမဲ့ ဂွမ်းလိပ်ကိုပင် ၀ယ်သုံးရတဲ့ နအဖ ဆေးရုံတွေလိုဘဲ ဆေးကမရှိ လေတော့ ပြင်ပဆေးခန်းတွေကိုဘဲ သွားကြရတာပေါ့၊ အလှူ ခံဌာနကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဆေးပဒေသာပင် , ဆွမ်းပဒေသာပင် , မီးပဒေသာပင် , ပညာရေးပဒေသာပင် စတဲ့စတဲ့ ပဒေသာပင်တွေက ကမ္ဘာ့မြေပြင်မှာပေါက်သမျှ သစ်ပင်ရဲ့နာမည်တွေကပင် အရှုံးပေးရမလောက် ပါဘဲ၊ နောက်ဆုံးတော့လည်း အသီးသီးပေမဲ့ သံဃာတော်အများ သုံးဆောင်ခွင့်မရှိတဲ့ တခုတည်း သော ဘဏ်ပဒေသာပင်ကြီးသာ ဖြစ်သွားခဲ့တော့တာပါ၊
တခါမှာတော့ စာရေးသူနေတဲ့ အဆောင်အနီးက ကျောင်းဆောင် တစ်ဆောင်ကဘဲ ကိုရင် တစ်ပါး ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်ရာ ဆေးကုစရာဝတ္ထုငွေကမရှိ မိဘတွေကလည်း အင်မတန် ခရီးဝေးကွာလှတဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တောရွာ တနေရာက ၊ တနေ့ ကျန်းမာရေးပြန် ကောင်းလာနိုးနိုးနဲ့ မျှော်လင့်နေခဲ့ကြပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ အသက်ရှူတွေကြပ်လာလို့ သူငယ်ချင်းတွေငွေစုပြီး ပဲခူးဆေးရုံကြီးကိုသွားပြကြတဲ့အခါ အဖြေကနောက်ကြသွားခဲ့ပြီတဲ့လေ ၊ ရောဂါကတော့ အသဲရောင်အသားဝါ ၊ အဲဒီရောဂါနဲ့ဘဲ ဆေးရုံကိုရောက်ပြီးလို့ ၇-ရက်မြောက်နေ့ မှာ ပျံလွန်တော်မူသွားရှာတယ်၊ လူအသက်တစ်ချောင်းကို တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ မေတ္တာ ကရုဏာ ကြီးမားတဲ့ ဆရာသမားတွေရဲ့ အရိပ်အာဝါသကိုများ ခိုလှုံခွင့် ရခဲ့ပါလျှင် အခုလို အကြွေစောခြင်မှ စောပါလိမ့်မယ်၊ အခုတော့လည်း အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်စတဲ့ အကျဉ်းထောင်ကြီးတွေက လူတန်ဖိုးနှင့် အကြင်နာ မေတ္တာ ကရုဏာတွေခေါင်းပါးတဲ့ အာဏာရှင်ထောင်မှူးတွေရဲ့ လက်အောက်မှာ ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့မယ့်သူ မရှိတဲ့ အကျဉ်းသားတို့ရဲ့ဘ၀လို ကြခတ်ဝိုင်း ဆိုတဲ့ အကျဉ်းထောင်ကြီးထဲက စာသင်သား အကျဉ်းသားတို့ရဲ့ဘ၀ဟာ ပြန်စဉ်းစားမိရင် ရင်နာဖို့တိုင် ကောင်းပါတယ်၊ သံဃာတော်အများစုကတော့ အာဏာရှင် ထောင်မှုးကြီးရဲ့ လျက်လျှူ မှုကြောင့် ယခုလိုဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရုံမှတပါး ဘာမှမတတ် နိုင်ရှာကြချေ ၊ သွားလေသူ သားကိုရင်ရဲ့ မျက်နှာလေးကို မိဘတွေ နောက်ဆုံးဖူးမျှော်ခွင့်ရအောင် စီစဉ်ပေးလောက်ပါရဲ့လို့ ဘ၀တူသံဃာတော်များက မျှောလင့်နေခဲ့မိကြတယ်၊ သို့သော်လည်း အာဏာရှင်ကြီးရဲ့ နှလုံးသားကတော့ မာလျှက်ပါဘဲ ။ ပျံလွန်တော်မူတဲ့နေ့မှာဘဲ မီးဖိုဆောင်ထဲက ထင်းချောင်းနဲ ကားဂိုဒေါင်ထဲက ဓာတ်ဆီကိုယူပြီး သုဿာန်တစ်ခုမှာ မီးသင်္ဂြိုဟ်လိုက်ပါတော့ တယ်၊ မိမိရဲ့ကျောင်းဆောင်လေးကိုတောင် တခဏတာမျှ ခေါင်းချခွင့်မရရှာလေတော့တဲ့ဘ၀ ၊ ပျံလွန်တော်ပြီး ၇-ရက်မြောက်ရောက်မှ သားကိုရင်ရဲ့ မျက်နှာလေးကို မြင်လိုဇောနှင့် ခရီးကြမ်းကို အပြေးနှင်ရင်းရောက်လာကြတဲ့ မိဘနှစ်ပါး အတွက်ကတော့ သားကိုရင်ရဲ့မျက်နှာလေးကို မမြင်ရတော့ဘဲ စာသင်သားသံဃာတော်များက ၀တ္ထုငွေလေးတွေစုပြီး ကျင်းပတဲ့ ရက်လည်ပွဲ လေးကိုသာ သောကမျက်ရည်ကြားထဲက မှုန်ဝါးစွာနဲ့ဘဲ တွေ့မြင်ခွင့်ရသွားကြပါတော့တယ်၊ သားကိုရင်စားဖို့ ယူဆောင်လာတဲ့ မုန့်ဖက်ထုပ်လေးတွေလည်း အခုတော့ မျက်နှာငယ်သွား ခဲ့ရရှာပြီပေါ့ ၊ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေကြုံရတဲ့အဖြစ်အပြက် များစွာထဲက ပြရုပ် တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်၊
ယနေ့လူအများစု အစားအသောက် ညံ့ဖျင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောကြတဲ့အခါ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ကြီးကတော့ မပါမဖြစ်တဲ့ အခဏ်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေတာကို တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကြခတ်ဝိုင်းဆိုတဲ့ အကျဉ်းထောင်ကြီးရဲ့ စားရေး သောက်ရေးကလည်း ဖေါ်ပြပါ အကျဉ်းထောင်ကြီးရဲ့ ဌာနခွဲများဖြစ်နေရော့သလားလို့ပါဘဲ ၊ ဆွမ်းခံကရတဲ့ ဆွမ်းနဲ့ ဟင်းက စာချ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ အဆောင်ဘုန်းကြီးတွေအတွက်သာ လုံလောက်တယ်ဆိုတော့ စာသင်သား သံဃာတွေ အတွက်ကတော့ ကျောင်းက ဆန်ကောင်းတစ်တင်းကို နှစ်တင်းနဲ့လဲထားတဲ့ တပ်မ ၇၇-က ဆန်နဲ့ ချက်ထားတဲ့ထမင်း အဖတ်မပါတဲ့ ရေကဇွန်းရွက် ဟင်းအရေသောက် ငရုပ်သီးမှုန့်အကြမ်း ဖြူးထားတဲ့ငါးပိရေ ဆိုတော့ အင်းစိန်ထောင်ရဲ့ ဌာနခွဲလို့ ပြောလိုက်တာ ကတော့ လွန်မယ်မထင်ပါဘူး ၊ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဒီဟင်းနဲ့ ဒီထမင်းကို ၆-ပါး တစ်ဝိုင်း စားကြရတဲ့ ဘ၀ဆိုတော့ ပြင်ပထောင်ဝင်စာကို စောင့်နေကြရတဲ့ ထောင်သားတွေရဲ့ဘ၀လိုဘဲ နီးစပ်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေက ပေးပို့မယ့် ငါးပိကြော်တို့ ချဉ်ပေါင်ကြော်တို့ကို စောင့်နေကြရတဲ့ ကြခတ်ဝိုင်း အကျဉ်းသားတို့ရဲ့ဘ၀ဟာ အတိတ်က၀ဋ်ကြွေးများ ပါခဲ့နေရော့သလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်၊
ဒီထမင်း နဲ့ ဒီဟင်းကို စားရဖို့ကလည်း တစ်ပါးနဲ့ တစ်ပါး နှစ်တောင့်ထွာ အကွာဝေး အနေထားနဲ့ တန်းစီပြီး ဆွမ်းစားကျောင်း ထဲကိုဝင်ရတော့ နာရီဝက်လောက် အချိန်ယူရပါတယ်၊ တနေ့မှာတော့ တန်စီပြီးသွားနေကြရင်း ကိုရင်သုံးပါး နှစ်တောင့်ထွာထက် ဝေးကွာလို့ ဆိုတဲ့ ပြစ်မှုပုဒ်မနဲ့ အများသံဃာတွေ ဆွမ်းစားနေချိန်မှာ သူတကာတွေ ၀င်ထွက်သွားလာတဲ့ ဆွမ်စားကျောင်း အ၀င်ဝမှာ ၀မ်းလျားမှောက်ပြီး နေကြရတဲ့ မြင်ကွင်းကို တွေ့မြင်ရလို့ သုမေဓာရှင်ရသေ့ရဲ့ ဘုရားဆုပန်ခန်းကိုပင် ပြန်လည်သတိရ မြင်ယောင်မိသေးတော့တယ်၊ အခုလို လူဒါယကာ ဒါယကာမတွေရဲ့ ကွယ်ရာမှာ သံဃာကို သံဃာလိုမဆက်ဆံပေမဲ့ ဆွမ်းအလှူဒါန တွေရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ အမြဲဟောလေ့ရှိတဲ့ တရားတော်ကတော့ “စာတလုံး ဘုရားတဆူ” တဲ့လေ ၊ သံဃာတော်များရဲ့ နှစ်လုံးသားထဲမှာ ဘုရားဟောပိဋကတ်တွေ ကိန်းအောင်းနေတယ်၊ ဒါကြောင့် သံဃာတော်တပါး ကြွလာရင် ဘုရားတစ်ဆူကြွလာတယ်မှတ် ဆိုပါလား ၊ အဲဒီအချိန်မျိုးမှာ ဆိုရင်တော့ စာရေးသူတို့ ရဲ့ ဘ၀ဟာ ဘုရားတွေဖြစ်လို့ပေါ့ ၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ဘုရား ရာထူးက သိပ်တော့မမြဲလိုက်ပါဘူး၊ ဘုရားအဖြစ် ရာထူးက လျော့ကျတဲ့အချိန်ကတော့ လူဒကာ ဒကာမတွေ ပြန်သွားပြီးလို့ များမကြာမှီ ကျောင်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြတဲ့ အခါဘဲဖြစ်ပါတယ်၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်း ပင်ပန်းလို့ ခေတ္တမတ်တတ်ရပ် နေတာကိုတွေ့တာနဲ့ ဆဲဆိုလေ့ရှိတာကတော့ “ဟိုနွား အလုပ်မလုပ်ဘဲ ဘာလို့ ရပ်နေတာလဲ “ တဲ့ ၊ဪ ကြခတ်ဝိုင်းဆိုတဲ့ အကျဉ်းထောင်ကြီးထဲက ငါတို့ရဲ့ဘ၀ဟာ ဘုရားဖြစ်လိုက် နွားဖြစ်လိုက်ပါလား နော် ----။
တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များက သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲအတွက် အိန္ဒိယ၏ ထောက်ခံမှုကို တောင်းခံ
Wednesday, 28 November 2007 22:06 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားများ၏ ထီးရိပ်အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်သော “တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ ကောင်စီ” ENC က သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို စစ်အစိုးရအနေဖြင့် စတင်နိုင်ရေးအတွက် မိမိ၏ သြဇာအရှိန်အဝါကို အသုံးပြုကာ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အိန္ဒိယအစိုးရအား တောင်းဆိုလိုက်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြို့တော် နယူးဒေလီသို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိနေသော အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးပါဝင်သည့် ENC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က အိန္ဒိယ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြာရှည်စွာ ထွက်ပေါက်ပိတ်နေသော အကြပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် မြန်မာစစ်အစိုးရ၊ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သည့် သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ ပေါ်ပေါက်ရေး၏ အရေးပါမှုကို မီးမောင်းထိုး ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းကို သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲနဲ့သာ အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ် လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ENC ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဒေါက်တာလျံမုန်းဆာခေါင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ENC ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် “မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အိန္ဒိယ ပါလီမန်အမတ်များ ဖိုရမ်” IPFDB ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ၂၅ နိုဝင်ဘာ မှ ၂၇ နိုဝင်ဘာအထိ ၃ ရက်ကြာ အလည်အပတ် ခရီးစဉ်အဖြစ် ရောက်ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤခရီးစဉ်အတွင်း ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပါလီမန်အမတ်များ အပါအဝင် အိန္ဒိယခေါင်း ဆောင်များ၊ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ စာနယ်ဇင်းသမားများ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဤခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ့ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်စဉ်ကို ထောက်ခံရန် အရေးကြီးပုံကို အိန္ဒိယ ခေါင်းဆောင်များအား ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ ထို့ပြင် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးသော မြန်မာနိုင်ငံကသာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွါးကို ပိုမို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ကြောင်းလည်း ခုခံ ပြောဆိုခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ENC ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အိန္ဒိယ ပါလီမန် အမတ်များကလည်း လာမည့် ပါလီမန် အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန်တွင် မြန်မာ့အရေးကို မီးမောင်းထိုး တင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တုံ့ပြန် ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
“အိန္ဒိယပါလီမန် အမတ်အချို့နဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာ့အရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ပါလီမန် အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန် ရောက်ရင် မြန်မာ့အရေးကိစ္စကို ပါလီမန် အချေအတင် ဆွေးနွေးပွဲမှာ တင်သွင်း ဆွေးနွေးသွားဘို့ သူတို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်” ဟု ယူရိုဘားမားရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ENC ၏အကြံပေး ဟန် ညောင်ရွှေ က ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကို ရက်စက်စွာ နှိမ်နင်းခဲ့ပြီးနောက် အကြမ်းဘက် အာဏာရယူခဲ့သည့် မြန်မာ စစ်အစိုးရအပေါ် တင်းမာသော သဘောထား ထားရှိခဲ့သည့် နိုင်ငံအနည်းငယ်အနက် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်လည်း တနိုင်ငံ အပါအဝင် ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရက အရမ်းကာရော အကြမ်းဘက် နှိမ်နင်းနေချိန်တွင် ရန်ကုန်ရှိ အိန္ဒိယသံရုံးက ကျောင်းသားများကို ခိုလှုံရာနေရာများ ပေးခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံရန်ပင် အကြံပြုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
သို့သော် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူဝါဒများသည် ၁၉၉ဝ စုနှစ် အစောပိုင်းကာလများတွင် အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ သြဇာအာဏာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖြန့်ကျက် ရောက်ရှိလာမှုကို ကာကွယ်ရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွါးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရန် လိုအပ်သည်ဟု အိန္ဒိယမူဝါဒ ချမှတ်သူများက အကြောင်းပြခဲ့ကြသည်။
“အိန္ဒိယ အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရဆီက မျက်နှာသာရရေး တရုတ်နဲ့ မပြိုင်သင့်ဘူး၊ အဲဒီမှာအကြောင်း ၂ ချက် ရှိတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်က ကျင့်သုံးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ချင်း မတူဘူး၊ တရုတ်က ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ။ အိန္ဒိယအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ရေရှည်အကျိုးစီးပွါးကိုသာ ကြည့်သင့်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ဆက်ဆံရေး ကောင်းအောင် လုပ်နေတာဟာ အိန္ဒိယအတွက် သိက္ခာကျစရာဘဲဖြစ်လာမှာ” ဟု ဆာခေါင် ကပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှည်ကြာစွာ ထွက်ပေါက် ပိတ်နေသော ပြဿနာကို စစ်မှန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်မှသာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွါး၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများရဲ့ အကျိုးစီးပွါးကို တကယ်တမ်း အထောက်အကူပြုမှာ ဖြစ်ကြောင်း ENC ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းကို သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကသာ စစ်မှန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရ၏ အုပ်စိုးမှုကို အဆုံးသတ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ဆာခေါင် က ဆက်လက် ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြန်လည်ထူထောင်၍ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး သူရဲကောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အစပျိုးခဲ့သည့် ၁၉၄၇ ပင်လုံစာချုပ်အပေါ် အခြေခံသော စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု အစိုးရစနစ်ကို ထူထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
Mizzima News ( www.mizzima.com )
November 28, 2007 - The Indian government gas been urged by the Ethnic Nationalities Council to use its influence over the Burmese military and help kick-start the process of national reconciliation throughatripartite dialogue. The Council is an umbrella group of Burmese ethnics in exile.
A four-member ENC delegation, visiting India's capital New Delhi, said during their meetings with Indian leaders they highlighted the need foratripartite dialogue between the Burmese military junta, pro-democracy leader Daw Aung San Suu Kyi and ethnic leaders to resolve Burma's long political impasse.
"We believe Burma 's political crisis can be best solved through the process of tripartite dialogue," Dr. Lian H. Sakhong, General Secretary of the ENC said.
The delegates said they briefed Indian leaders of the importance of supporting Burma's process of dialogue and argued that India 's interest would be better served byafederal democratic system in Burma.
In response to the ENC delegates' request, Indian parliamentarians said they would highlight the Burma issue at the next parliamentary session.
"We have discussed with some of the Indian Members of Parliament the Burma issue and they agreed to take it up asaParliamentary debate in the next session," Harn Yawnghwe Director of Euro-Burma office and Adviser of ENC said.
"The Indian government should not compete with China for favours from the Burmese junta basically because of two things. Both India and China haveadifferent political system. While India isademocracy, China isaCommunist state. India should think of its long term interest, and maintainingarelationship with the junta will only hamper its image," Sakhong said.
The ENC leaders said India 's national interests as well as the interest of regional countries could only be best served withagenuine solution to Burma 's long political stalemate.
Sakhong said, Burma's political crisis can only be genuinely resolve withatripartite dialogue that will bring an end to military rule, restoration of democracy and establishingagenuine federal system of government based on the1947 Pang long agreement, initiated by Burma 's independence hero Bogyoke Aung San.
KIO senior intelligence chief released by junta
November 23, 2007KNG
Senior intelligence chief, Lt. Gala Brang Shawng of the Kachin Independence Organization's (KIO) who had been detained by Burmese military junta authorities was released on Monday after repeated requests by KIO leaders,amember of his family said.
"He is now at the KIO military headquarters in Laiza controlled area. He moved there after his release from jail," said the family member.
Lt. Gala Brang Shawng was arrested withapistol early last month at Burma Army checkpoint in Shadau village on Myitkyina-Mandalay Highway, 14 miles south of Myitkyina.
The KIO had requested the junta twice by sending official letters appealing for his release to the Northern Military Command Headquarters (Ma-Pa-Kha) in Myitkyina.
It made another request early this month when KIO leaders met Maj-Gen Ye Myint, Chief of Military Affairs Security of the ruling junta in Myitkyina.Meanwhile, the Burmese Army's, Infantry Battalion No.146 detained five KIO soldiers and three office staff yesterday morning at Dingga Controlled Areas Office in Dawhpum Yang region under the KIO's 3rd Brigade.
The detention of the KIO servicemen comes in the wake of illegal Chinese wireless landline phones being suddenly seized in KIO liaison offices and from homes of officials' in two major cities of Kachin State—Bhamo and Myitkyina by the ruling junta, five days ago.
This afternoon,aconvoy of Burmese military trucks crossed Balaminhtin Irrawaddy River Bridge from Myitkyina to Waingmaw, --- areas east of Irrawaddy River where the KIO headquarters is located, eyewitnesses in Myitkyina told KNG.
On the other hand, the three Burma military battalions including Waingmaw based Infantry Battalion N0. 58 and Shwenyaungbin based Light Infantry Battalion No. 321 are operating in the gold mining areas in Nam San Yang near Laiza, the KIO controlled areas. The army has arrested and driven out the gold miners, said locals.This is the latest in terms of military pressure by the junta on the KIO after it refused to issueastatement opposing Burma's democracy leader Daw Aung San Suu Kyi's November statement released in Singapore by UN special envoy Mr. Ibrahim Gambari.
တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက်မှဦးပူကျင့်ရှင်းထန်၊ ရခိုင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ.
ကရက်မှ ဦးခွန်းထူးတို.ကို နိုဝင်ဘာလ၊၂၀၊ရက်နေ.မနက်ပိုင်းမှာ စစ်ဆေးမေးမြန်စရာရှိတယ်ဆိုပြီး အာဏာ
မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်မှ နိုင်ငွေသိန်းကိုလဲ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ.ညနေပိုင်းမှာလာရောက်ခေါ်
ဆောင်သွားပါသည်၊ အသက်(၈၅)နှစ်ရှိပြီးဖြစ်သောဝါရင်.မွန်နိုင်ငံရေးသမားခေါင်းဆောင် နိုင်းငွေသိန်းကိုအ
အောင်သပြေစစ်ကြောရေးစခန်းမှာ နှစ်နာရီလောက်ထိုင်ခိုင်းခြင်းနဲ.စစ်ဆေးပြီးနောက် နေ.တွင်းချင်းပြန်လွှတ်
"The gate was closed at9p.m. last night. No people, cars or motorcycles are being allowed to cross the gate by the Burmese Army. Travellers from both controlled areas are in deep trouble,"aresident of Lajayang told KNG this evening.
Last Saturday, Burmese soldiers and the military intelligence also called the Military Affairs Security Unit (Sa-Ya-Pha) raided KIO liaison offices and homes of officials in Myitkyina and Bhamo and seized all illegal Chinese wireless landline phones without notice. Even the home of KIO vice-president N'ban La Awng in Shatapru quarter in Myitkyina was not spared, KIO officials said.
Cheap, easy to buy and good service of the Chinese telephones compared to the junta's telephones make people from all backgrounds even the junta, the Kachin ceasefire groups and civilians use these illegal phones, said residents of Myitkyina.
Now again the KIO is being pressurized by the junta but the KIO will not issue any statement either supporting or against Mrs. Aung San Suu Kyi's statement, KIO senior leaders said.
ကချင်းပြည်နယ်၊ ဖကန်.ရှိ ကျောက်စိမ်းတွင်းတွေကိုဦတေဇချိုပ်ကိုင်လိုက်ပြီ
November 20, 2007 KNG
Now, heavy machines such as bulldozers, digging machines and trucks are seen everywhere in Phakant and Lonkin jade mining areas, eyewitnesses said.
Currently, the junta's 16th Mid-Year Gems Emporium is underway in Rangoon, former capital of Burma. It has showcased 5,140 jade lots with other gems on the basis of tender and competitive bidding for 13 days until November 26, according to the junta-run newspaper "New Light of Myanmar".
In the 44th annual Myanmar gems emporium held in March this year and attended by 3,421
merchants, including over 2,000 foreigners, 3,652 lots of jade, gems and pearls were sold out raking in 185 million U.S. dollars, according to earlier official statistics.
Again in July this year,aspecial gem, jade and pearl sale, which attracted even more merchants, about 4,000 including 2,437 foreigners, sold more, touching 4,665 lots but the proceeds were not disclosed.
There are six gem and jade mining areas in Burma, three of them are Lonkin/Phakant (Lawng Hkang/Hpakan, Monyin and Namyar (Nam Ya) in Kachin State.
Te Za owns Air Bagan and also controls other major business sectors in partnership with the ruling junta's generals. He has invaded the Phakant jade mining areas since last year.
စင်္ကာပူမျိုးချစ်မြန်မာများအား Citizen Heroes ဆုနဲ.ထိုက်တန်ပါသည်၊တိုင်းရင်းသားအသံမှဂုဏ်
Free Burma activists take to the streets in S'pore: Watch Video here
May Oo November 18, 2007
The relief organization' s report further notes that 64 rice fields were being blocked and controlled by the SPDC troops. North of the Thay Loh Klo River,atributary of the Yunzalin River, troops were firing mortar rounds into the surrounding rice fields to keep villagers away. The Free Burma Rangers say these attacks are the most recent phase of an offensive, which began last year and has displaced over 30,000 people and killed over 370 villagers in Northern Karen State.
According toarecent telephone interview with the NLD spokesperson Myint Thein, it looks like Aung San Suu Kyi will soon be released. As widely reported, she was recently permitted to meet with her party's leaders for the first time in three years. During the meeting, according to another party spokesperson named U Lwin, Aung San Suu Kyi reported to her party leaders that she has agreed to cooperate with the ruling junta to exploreapossible dialogue process in consideration of ethnic nationalities, presumably the non-Burmans. So far so good. Aung San Suu Kyi now believes "the ruling authorities have the will for national reconciliation, " as the Los Angeles Times reported. She and her party leaders will have to convince the country that this is indeed true.
May Oo isaformer Karen refugee from Burma,agraduate of San Francisco State University, andacontributor to Foreign Policy In Focus (http://www.fpif.org/). She is currentlyaPh.D student in law and social science at Indiana University School of Law andafellow at the Center for Constitutional Democracy in Plural Societies.
Mon 19 Nov 2007IMNA
About 50 Monks from Arakan State were turned back after the authorities checked their recommendations at Rangoon station, saidamonk who recently returned from Rangoon.
The monk said that the authorities are investigating monks at tea shops. They are being polite to monks and are also offering them coffee during questioning.
The monks do not dare to go to Rangoon because they are apprehensive of not getting permission from the authorities. That is the reason monks from Mon State rarely go to Rangoon for religious education these days.
Most residents and monks in Mon State who do not have relatives in Rangoon used to go to Rangoon for treatment and stayed at the monasteries.
The raid follows the KIO's refusal to signastatement opposing Aung San Suu Kyi's November 8 statement that she had been approached byanumber of ethnic groups to represent them in the dialogue with the military junta. The junta has been arm twistinganumber of ethnic ceasefire groups to issue statements refuting Suu Kyi's statement.
"The statement only concerns Daw Aung San Suu Kyi and the junta. So, we assume we are not required to release any special statement on it, till now," The KIO vice-chairman Gauri Zau Seng assured KNG this evening.
The junta-run newspaper the New Light of Myanmar stated this week, that seven ethnic ceasefire groups in Burma – the Lahu National Development Party, Kokang Democracy and Unity Party, Shan State Army of Shan State (North) Special Region-3, Kachin Defence Army of Shan State (North) Special Region-5, Karenni Nationalities People's Liberation Front, Palaung Nationalities Group of Shan State (North) Special Region-7 and Kayinni National Peace and Development Party have released statements countering Aung San Suu Kyi statement.
A member of the Sino-Burma border trade zone, Muse based Kachin Youth Organization, which is aware of trafficking in women from Kachin to China, said they have recorded over 80 Kachin girls being taken away from Namphakka (Nam Hpak Ka), Namkham, Homong, Di Ma, Dat Nai, Mongbaw, Monggu, Kutkai, Muse and Kachin Defence Army (KDA)'s headquarters Kawng Hka in Northeast Shan State. They were sold to Chinese businessmen by traffickers as of 2004.
အရှင်ကောဝိဒရဲ့စာထဲမှာထောက်ပြချင်သည့်အချက်ကတော့ ” ဒါယိကာမကြီးရဲ့ကြေညာချက်ကိုရေဒီ
မယ်၊ဒေါ်စုဆီကလည်းပြည်သူတွေကိုပြောစရာရှိနေမှာပဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ဦးဇင်တို.ရဟန်း
ရှင်လူပြည်သူတွေဟာ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်က အခက်အခဲတွေ အတားအဆီးတွေကျော်ဖြတ်ပြီး
“Ethnic Nationalities Council welcomes Daw Aung San Suu Kyi's Statement”
The Ethnic Nationalities Council (ENC) warmly welcomes Daw Aung San Suu Kyi's statement, which was released by Mr. Gambari, the UN Secretary-General's Special Advisor for Burma on 8 November 2007.
The ENC Chairman Saw Ba Thin said, “Her statement reflects the Panglong Spirit---the spirit and principle on which the Union of Burma was founded in 1947 by her father, General Aung San, and ethnic leaders”.
The ENC strongly believes that the best means to solve political crisis in Burma is througha“tripartite dialogue” amongst the SPDC, the 1990 election winning party led by Daw Aung San Suu Kyi and ethnic nationalities, as called for by the United Nations General Assembly's resolutions since 1994 and reaffirmed also by the United Nation Security Council's Presidential Statement on 11 October 2007.
The ENC congratulates Mr. Gambari, the UN Secretary-General's Special Advisor, for undertaking this difficult mission but regrets that the SPDC Chairman Senior General Than Shwe did not meet with him during his latest visit to Burma.
The ENC is disappointed that the SPDC rejected Mr. Gambari's proposal for the establishment of “a broad-based constitutional review commission andabroad-based poverty alleviation commission”. However, as the talks between Daw Aung San Suu Kyi and General Aung Kyi progress, the ENC hopes that the SPDC will change its position.